ငတ်မပြေတဲ့အရသာ – Grab Love Story
နွေးထွေးလှတဲ့ သူမရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းရတဲ့အချိန်ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်က အရာရာတိုင်းကို မေ့နေချိန်ပေါ့။ နုအိထွေးနေသော နှုတ်ခမ်းလေးကိုသာ အဆက်မပျက် တတ်မက်နေမိတဲ့အချိန် ကျွန်တော် နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ….. “ကို… ဘာလို့လဲ လူလာနေလို့လား” “ဟင်…. အော် ဟုတ်တယ်ချစ်ရဲ့ ကိုလူသံကြားလားလို့” “ကိုကလဲကွာ ဒီကိုလာတဲ့လူတိုင်းက အတွဲတွေပဲဟာ ဂရုစိုက်မနေနဲ့” “ဟုတ်ပါပြီကွာ……ကဲလာ” “အွင့်” ကျွန်တော်လဲ သူမနှုတ်ခမ်းဖူးလေးကိုနမ်းရင်း လုံးဝန်းနေတဲ့ သူမရင်သားလေးအား ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ တကယ်တော့ သူမနှုတ်ခမ်းလေးမှ ရလိုက်သောရနံတစ်ခုဟာ ကျွန်တော်နဲ့ မေသက်နွယ်လို့ခေါ်တဲ့ အတန်းထဲက အချောအလှလေးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်တာ အခုဆိုရင် ခြောက်လပင်ကျော်လာပြီ ဖြစ်သည်။ မေသက်နွယ်ကလဲ ခပ်အေးအေးနေတတ်တဲ့ ကျွန်တော်ကို အရင်ထဲက သဘောကျခဲ့သည်ထင်သည်။ သူမကလဲ ကျွန်တော်ကို တအားချစ်ရှာသည်။
ကျွန်တော့်မှာတော့ သူမပြုံးပြလိုက်တိုင်း ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်ကာ သူမအား ရူးလောက်အောင် ချစ်ရသည်။ ကျွန်တော်ဟာ တကယ်ကံအကောင်းဆုံးလူပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မေသက်နွယ်ကို လိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးထဲကမှ သူမအချစ်ကိုရသော တစ်ဦးထဲသောလူသားဖြစ်သည်။ “ကို… ချစ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မြို့ထဲလျှောက်လည်မလို့” အနားမှ ချစ်သူလေးအသံကြားလိုက်မှ သေချာကြည့်မိလိုက်တယ် မေသက်နွယ်ဒီနေ့ အရမ်းလှနေသည်။ မြန်မာဝတ်စုံ လေးနှင့်မို့ သူမ၏ကောက်ကြောင်းများက ထင်ပေါ်လွန်းနေသည်။ မို့ထွက်နေသော ရင်သားနှင့် လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း တုန်ခါနေသောတင်သားများက မြင်သူတိုင်းက ငေးကြည့်ရမည့်သူဖြစ်သည်။ “ဘယ်သူတွေရော ပါမှာလဲချစ်ရဲ့ ” “သူငယ်ချင်းတွေပေါ့ ယောက်ျားလေးနဲနဲပါမယ်” သူတို့အဖွဲ့ကများလှသည် ယောက်ျားလေး လေးယောက်နှင့် မိန်းကလေးခုနှစ်ယောက်ရှိသည်။ သူတို့အဖွဲ့လာလျှင် တခြားသူတွေ ထွက်ပြေးရလောက်အောင် ပွေး(စနောက်)ကြသူများဖြစ်သည်။
“ကိုကလဲကွာ ရုပ်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ချစ်တို့အဖွဲကပျော်တတ်လို့ ကိုနေတတ်မှာဆိုးလို့ပါ” “ဟင်း………….” “ကိုလိုက်ချင်ရင်လဲလိုက်ခဲ့လေ ပြီးမှမနေတတ်ဘူးမပြောနဲ့” သူတို့က အဖွဲ့သားအချင်းချင်း ပြန်မကြိုက်ရဟုသော ကတိစကားကြောင့်သာ ကျွန်တော်မေသက်နွယ်အချစ်ကို ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်သူ့ကို စိတ်မချချင်မိ။ “ဟေ့… လိုက်မယ်မို့လားနွယ် ငါတို့ကသွားတော့မှာနော်” “ကို… ကိုမလိုက်ရင် ချစ်သွားတော့မယ်နော်” “အင်း…… အင်း…….. သွားလေ” မေသက်နွယ်နှင့် ငယ်သူငယ်ချင်းဆိုသော ကောင်က လာခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကောင်က ကျွန်တော့်ကိုသိပ့်မကြည်ပေ။ ထို့ကြောင့်မေသက်နွယ်အား ပြောပြီူးည်နှင့် ချက်ချင်းလှည့်ကာထွက်သွားသည်။ သူချိန်နေသောသူကို ကျွန်တော်က ပိုင်ဆိုင်ထားသောကြောင့် ဖြစ်မည်ထင်သည်။ ထိုနေက ကျွန်တော် မေသက်နွယ်ကို ဒီအတိုင်းလွှတ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော်ကတော့ အတန်းဆက်တတ်နေလိုက်သည်။
အတန်းပြီးမှ ကျောင်းနားက ထိုင်နေကြ ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာထိုင်ရင်း မေသက်နွယ်ပြန်အလာကို စောင့်နေလိုက်သည်။ “သားကြီး မင်းစော်မပါဘူးလားကွ မင်းကလဲစော်ရပြီးမှ ရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်နဲ့” “ဟာ… မဟုတ်ကပါဘူးကွာ မင်းတို့ကလဲ မေသက်နွယ်က သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပါသွားလို့ကွ လာစောင့်နေတာ” “ခုရော ငါတို့ထိုင်လို့ရတယ်မို့လား” “ငါ့ကိုလာရွဲ့နေတယ် နှပပေးက ထိုင်…..” “အမယ်… ငါ့နှမလိုချင်ရင် မင်းစော်နဲ့လဲမယ်လေ” ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က ပြောမနာဆိုမနာမို့ တွေ့ကြပြီဆို စော်တောင်းတဲ့သူနှင့် နှမတောင်းတဲ့သူနှင့် ဆုံနေသည်။ မှုလတန်းထဲကတန်ခဲ့တဲ့ကောင်က ကျွန်တော့်လက်ထဲကဆေးလိပ့်ကိုယူပြီး သောက်ရင်း ကျွန်တော့်နားလာထိုင်ကာ “ဟျောင့် ဘယ်နဲ့လဲကွ မင်းစော်ကို ဖောက်ပြီးပြီလား” “ဟာကွာ မင်းကလဲ ငါကသူ့ကိုဒီတိုင်းချစ်တာပါကွ” “မင်းကတော့ပိုပြီ မင်းမဖောက်ချင်ရင်ငါဖောက်ပေးမယ်လေ” “တော်တော်တော် ဟျောင့်” “ဒီမယ်ဟျောင့် မင်းမဖောက်ရင် သူများကဖောက်သွားမှာ အဲ့မှငိုပြီး ကျန်နေခဲ့မယ်။
မင်းစော်က အပေါင်းသင်းလဲများပါဘိနဲ့” ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရဲ့ စကားမဆုံးသေးခင်မှာဘဲ မေသက်နွယ်တစ်ယောက် သူ့သူငယ်ချင်းဆိုသောကောင်နှင့် ဆိုင်ရှေ့ကို ရောက်လာသည်။ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေလဲ စကားလမ်းကြောင်းလွဲကာ ပြောင်နောက်ကာ နေလိုက်ကြသည်။ ကျွန်တော်လဲ မေသက်နွယ်နှင့်အတူ တိုင်မှထွက်ခဲ့လိုက်ပြီး ကျောင်းထဲက တွေ့နေကြနေရာလေးကို သွားခဲ့လိုက်သည်။ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းစကားကြောင့် ကျွန်တော်မေသက်နွယ်ကို စဖို့ကြိုးစားလိုက်သည်။ ကျွန်တော်လဲ ရောက်ရောက်ချင်း မေသက်နွယ်နှုတ်ခမ်းလေးအား နမ်းလိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်က ပေါင်လေးကိုပွတ်ပေးလိုက်သည်။ မေမသက်နွယ်မှာ တစ်ချက်တွန်သွားသော်လည်း မငြင်းဆန်သည့်အပြင် ကျွန်တော့်အားဖက်ကာ နှုတ်ခမ်းတွေကို အဆက်မပျက်နမ်းလာသည်။ ကျွန်တော်လဲမေသက်နွယ်ကို ကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ်သို့ ဆွဲတင်လိုက်ပြီး ထဘီစကပ်လေး၏ အတွင်းကို နှိုက်ကာ ပေါင်လေးကို ပွတ်ပေးလိုက်သည်။
မေသက်နွယ်မှာ ကျွန်တော်အား တင်းကြပ်စွာဖက်ပြီး အနမ်းတွေကလဲ မြန်လာသည်။ မေသက်နွယ်၏ နုညံ့သောပေါင်သားလေးများမှနေပြီး တင်သားများကို အဆင့်တတ်ကာ ကိုင်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေချင်းကို ရပ်လိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာကျွန်တော်ကို တင်ကြပ်စွာဖက်ပြီး အသက်ရှုသံများလဲ မြန်နေသည်။ ကျွန်တော်လဲ ရှေ့ဆက်တိုးကာ သူမပင်တီလေးကိုကိုင်ပြီး ချွတ်ဟန်ပြုလိုက်သောအခါ ခါးဖလးအား အသာတကြည်လေးကြွကာပေးသောကြောင့် ကျွန် တော့်စိတ်တွေလဲပိုမိုရဲတင်းလာကာ အဆုံးထိချွတ်ပြစ်လိုသည်။ ကျွန်တော်လဲ သူမအား ကျွန်တော့်အပေါ်တွင် ခွရက်ဖြစ်သွားအောင် နေရာပြင်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးမှ ကျွန်တော့်ပုဆိုးကို ချွတ်ကာ ကျွန်တော့်လီးကို သူမစောက်ဖုတ်လေးတွင် တေ့ပေးလိုက်သည်။ တခါမှ မိန်းမနှင့်မတွေ့ဖူးသူ ကျွန်တော်အဖို့ မေသက်နွယ်ဖုတ်လေးမှာ နုညံ့ပြီးရင်ခုန်စရာ ကောင်းလှသည်။ မေသက်နွယ်ကလဲ ကျွန်တော်အား တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားရာမှ ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းတွေအား ပြန်လာနမ်းပြန်သည်။
ကျွန်တော်လဲ သူမကို လှဲစေလိုက်ပြီး ပေါင်ကလေးထဲသို့ ဝင်လိုက်သည်။ ပြီးမှ ကျွန်တော့်လီးအား သူမအဖုတ်လေးတွင်တေ့ကာ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာ ခေါင်းလေးပင်မော့သွားပြီး အံကြိတ်နေရှာသည်။ မေသက်နွယ်ထုတ်လေးမှ အရည်တွေထွက်နေသောကြောင့် ကျွန်တော့လီး တစ်ခေထာင်းလုံး ဝင်သွားသည်။ အား…. ကို…… နာတယ်….. အား….. သူအသံကြောင့်ဆက်မလုပ်သေးဘဲ နမ်းခမ်းကို နမ်းပေးနေလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်လဲ အသက်ရှုသံတွေပြင်းကာ ကျွန်တော့်ကို တအားဖက်နမ်းသည်။ သူမစောက်ဖုတ်လေးမှ လီးကို ညှစ်ညှစ်လာေူာကြောင့် နမ်းရင်း အသွင်းအထုပ်လုပ်ပေးလိုက်သည်။ အွင်း….. အွင်း…… အွင်း…….. အွင်း…. သူမလက်ကလေးများက ကျွန်တော့်ပုခုံးကို တအားစုပ်ကိုင်ရင်း ညည်းနေသည်။ ကျွန်တော်လဲ သူမစောက်ဖုတ်လေးက အရမ်းကောင်းလွန်းလှသောကြောင့် ခပ်မြန်မြန်လေးပင်လိုးပေးလိုက်သည်။ စောက်ဖုတ်လေးအတွင်းသားများကညှစ်ကာ ညှစ်ကာ ပေးသောကြောင့် နှေးတစ်ခါ မြန်တလှည့်နှင့် ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုးပေးလိုက်သည်။
မေသက်နွယ်၏ ရမက်ထန်သော ညည်းသံလေးမှာလဲ ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာသည်။ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးအား ဆောင့်လိုးနေသော ဆောင့်ချက်များကို မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ဆက်တိုက်ဆောင့်ကာ လိုးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်ကလဲ အောက်မှနေပြီး ပြန်ကာဆောင့်ဆောင့်ပေးသည်။ ကျွန်တော်လဲ သိပ့်မကြာခင်တွင် မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ လရည်များပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။ အင်း…… အင်း….. အင်း…. အင…… ကျွန်တော့်လီးကို ထုပ်ရင်း စောက်ဖုတ်လေးအားကြည့်လိုက်ချိန်တွင် သွေးစများနှင့်အတူ ကျွန်တော့်လရည်များ ပြန်လည်ကာ ထွက်လာသည်။ မေသက်နွယ် စောက်ဖုတ်လေးမှာလဲ လီးဒဏ်အပေါက်ကလေးဖြစ်ကာ ကျန်နေခဲ့သည်။ ထိုနေ့ကအပျော်တွေနှင့် မေသက်နွယ်နှင့် အတူအချိန်တွေက်ုကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ မေသက်နွယ်အား တားဆေးတိုက်မည်ဟုပြောသောအခါ ရာသီကဒီမနက်မှပြီးတာမို့ မလိုဘူးဟုပြောသည်။
ညနေတောတော်နောက်ကျမှမေသက်နွယ်အား ပြန်ကာပို့လိုက်သည်။ ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင် အရမ်းပျော်နေသည်မို့ ရာသီပြီးစတွင်လိုးလျှင် ရာသီပြန်လာတတ်တာကို မေ့ကာထားခဲ့သည်။ နောက်နေ့များတွင်တော့ မေသက်နွယ်နှင့် ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေနှင့် ခွဲခွဲထွက်ကာ ငတ်မပြေတဲ့စားငံရည်ကို ဆက်လက်ကာသောက်သုံးနေခဲ့ကြသည်။ “ကိုရာ…. ချစ်ဒီလိုနေရာကြီးမှာမနေရဲဘူး” “ကိုရှိနေတာပဲချစ်ရဲ့ လာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးကွ ကိုက ကို့ချစ်လေးနဲအေးအေးဆေးဆေးနေချင်လို့ပါ” “ဒီကိုလာရင် ချစ်တို့ဟွာလုပ်မယ်ဆထုတာသိနေကြတာကြီး ပြန်ထွက်တဲ့အခါသူတို့တွေကကြည့်နေမှာရှက်တယ်” “ချစ်ကလဲကွာ တွေးပူနေသေးတယ်……. လာ” ကျွန်တော်လဲမေသက်နွယ်အား တည်းခိုခန်းကကုတင်လေးပေါ်သို့လှဲလိုက်ပြီး မေသက်နွယ်အပေါ်မှ မိုးကာနှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းပေးလိုက်သည်။ ခဏကြာမှ မေသက်နွယ်လဲ ကျွန်တော့်လည်ပင်းကိုဖက်ကာ ပြန်နမ်းလာသည်။
ကျွန်တော်ကတော့နမ်းရင် သူမရင်ဖုံးအင်္ကျီလေးကို ချွတ်နေလိုက်သည်။ အနမ်းလေးခဏရပ်သွားချိန် မေသက်နွယ်အားကြည့်လိုက်သောအခါ ဘော်လီအနက်ရောင်လေးနှင့် ရှိုက်ဖိုသက်ငှင်ကာ လှပနေသည်။ ကျွန်တော်လဲ သူမရင်ညွှန်လေးပေါ်မှစကာ ရင်သားလေးများကို နမ်းပေးလိုက်သည်။ “ကို…… ချစ်ဘော်လီချွတ်ဦးမယ်ကွာ” ကျွန်တော်လဲ လက်ရှိုကာ သူမဘော်လီလေးကို ချွတ်ပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်နို့လေးများက ရမက်ဇောဖြင့်တင်းတောင်လျှက်ရှိနေသည်။ ကျွန်တော်လဲ ထိုနို့သီးခေါင်းလေးများကို စို့ပေးလိုက်ချိန်တွင် မေသက်နွယ်လက်ကလေးများမှာ ကျွန်တော့်ခေါင်းမှဆံပင်ကိုကိုင်ကာ ရင်ဘတ်ကိုကော့ကာကော့ကာ ပေးလာသည်။ သူမနို့သီးခေါင်းလေးများကို တလည့်စီစို့ပေးရင် ထဘီလေးကို အောက်သို့လျှောချကာ ချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ဟင်း… ဟင်း….ဟင်း… မေသက်နွယ်မှာ အသက်ရှုသံများမြန်လာပြီး ကျွန်တော့်လက်မောင်းများကို စုပ်ကိုင်လာသည်။ ထိုချိန်မှ ကျွန်တော်လည်း မေသက်နွယ်ပင်တီလေးပေါ်မှ စောက်ဖုတ်လေးကို နှုတ်ခမ်းဖြင့်ဖိကာကိုက်ပေးလိုက်သည်။
မေသက်နွယ်မှာတော့ ခါးကိုကော့ကာကော့ကာပေးပြီး ကျွန်တော်ခေါင်းကို ဖိလာသည်။ အား…. အား……. အား…… ကျွန်တော်လည်း သူမစောက်ဖုတ်သင်းရနံလေးကြောင့် ပင်တီလေးကိုချွတ်ပြီး စောက်ဖုတ်လေးအား လျှာဖြင့်ယက်ကာစုပ်ပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာတော့ အရသာကိုသိနေသယောင် ပွစိပွစိဖြစ်လာသည်။ မေသက်နွယ်မှာတော့ စောစောကထက်ပိုကာ အိပ့်ယာခင်းများကိုစုပ်ကိုင်ရင်း လူးလိမ့်နေသည်။ ကျွန်တော်လဲ မေသက်နွယ် စောက်စိလေးအား အလေးပေးကာ ယက်ပေးလိုက် စုပ်ပေးလိုက်ဖြင့် ပြုစုပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာ ပေါင်လေးနှစ်ဖက်ကကျုံကာလာပြီး ခါကို ကော့ကာပေးလာသည်။ နှုတ်ခမ်းလေးကိုကိုက်ကာ အသံမျိုးစုံထွက်နေပုံမှာ မေသက်နွယ်ရမက်ကို ခန့်မှန်းသိနိုင်သည်။ အား….. ရှိး…… အား…… အိုး….. ထို့နောက်မေသက်နွယ်က ကျွန်တော့်ကိုအပေါ်ဆွဲတင်ပြီး ပုဆိုးကို ချွတ်ပေးလာသည်။ ပြီးမှ ကျွန်တော့်လီးကို ကိုင်ကာ စောက်ဖုျလေးတွင်တေ့ပေးပြီး ခါကိုကော့ပေးလာသည်။ လီးမှာ စောက်စိလေးအားပွတ်ပြီးခေါ်ထွက်သွားသည်။
ပြီးမှ ကျွန်တော်လဲ လီးကိုကိုင်ကာ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးအားဖြဲပြီး လီးကိုတရဆက်ဆောင့်ထည့်ကာ လိုးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာလဲ လီးအဝင်အထွက်အဆင်ပြေစေရန် ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုလ်ဖြင့်ကိုင်ဖြဲကာ ကျွန်တော့်ဆောင့်ချက်များကို ခံနေသည်။ အား… အား…. အား…အား…… “ကို…… ဆောင့်ပေး…. ပြင်းပြင်းလေးဆောင့်ပေး…. စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ လီးဝင်ထွက်သံများကလဲ ဆူညံစွာထွက်ပေါ်နေသည်။ ထို့နောက်မှ မေသက်နွယ်ကကျွန်တော်ပခုံးကို သိုင်းဖက်ကာ ကြမ်းကြမ်းလာနမ်းရင်း အောက်ကလဲ ကျွန်တော်နှင့်အညီ ပြန်ကာပြန်ကာ ဆောင့်လိုးလာသည်။ တည်းခိုခန်းမှကုတင်ကလဲ ကျွနိတော်တိုတောင့်ချက်ကြောင့် နံရံကိုတိုက်ကာ တဒုံးဒုံးမြည်နေသည်။ “ချစ် ကုန်းပေးကွာ ကိုနောက်ကနေ လိုးချင်လို့” ကျွန်တော်လီးကို ထုပ်ပြီး မေသက်နွယ်အား ကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်ကုန်းလိုက်ချိန်တွင် တုန်ခါနေသော သူမ၏တင်းသားများကို တချက်ရိုက်လိုက်သည်။
ပြီးမှ လီးကိုကိုင်ကာ မေသက်နွယ်တင်သားလေးတစ်ဖက်ကိုဖြဲပြီးထည့်လိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာ ကျွန်တော့်လီးဝင်လာသည်နှင့် ရှေ့ကနေပြီးဆောင့်ပေးတော့သည်။ ကျွန်တော်လည်း သူမဖင်ကြီးတွေကို ရိုက်ပြီး ဆောင့်ခိုင်းလိုက်သည်။ သူမဖင်ပေါက်ကလေးမှာလဲ စောစောကသူမစောက်ရည်များနှင့်စိုစွတ်ကာ နေသည်။ ကျွန်လည်းမဖင်ပေါက်ကလေးကို လက်မဖင်ဖိ့ကာသွင်းပေးလိုက်သည်။ အား…… မေသက်နွယ်မှာချစ်ချက်မျှညိမ်သွားပြီး ပြန်ဆောင့်ပေးသည်။ ကျွန်တော်လဲ သူမနှင့်အတူ ပြန်ကာဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ “ချစ် နံရံကို ကြည့်လိုက်……….” ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လိုးနေပုံကို တည်းခိုခန်းမှ နံရံမှမှန်တွင် မြင်နေရသည်။ မေသက်နွယ်မှာ မိမိလိုးနေပုံကို ပြန်မြင်နေရသောကြောင့် ရမက်စိတ်များပိုမိုတတ်ကာ အရင်ကထက်ပို၍ပြင်းသော ဆောင့်ချက်များနှင့် ဆောင့်လာသည်။ ကျွန်တော်လဲသူမဖင်ပေါက်လေးထဲကို လက်မတစ်ချောင်းလုံး အဆုံးထိသွင်ကာပေးထားလိုက်သည်။
“အား….. ကောင်းလိုက်တာချစ်ရာ…. အား….. ဆောင့်ဆောင့်…. အား……… ကျွန်တော်လည်း နောက်မှနေပြီ မေသက်နွယ်အိုးကြီးကို စီးချက်ညီ ဆောင့်လိုးပေးလိုက်သည်။ အခန်းထဲမှမေသက်နွယ်နှင့် ကျွန်တော်ရဲ့ အသားချင်းရိုက်သံများ စောက်ဖုတ်ဆီမှထွက်လာသောအသံများမှာ အတော်ပင်ကျယ်လောင်နေသည်။ “ချစ်……….. မှန်ထကြည့်ပြီး ကို့ပေါ်ကနေ တတ်ဆောင့်ပါလား” “အ့….. ကိုကလဲ အ့ ချစ်ရှက်တယ်” “လာပါကွာ ချစ်ကလဲ” ကျွန်တော်လဲမေသက်နွယ်ကို ခါးကနေကိုင်ပြီး လဲလိုက်ကာ ကျွန်တော့်ပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်သည်။ မေက်နွယ်က စောက်ဖုတ်လေးတွင် လီးကိုတေ့ကာ ဆောင့်ပေးသော်လဲ မှန်ကိုမျက်နှာလွဲကာနေသည်။ ကျွန်တော်လဲ သူမစောက်ဖုတ်မှ စောက်စိလေးကို ပွတ်ပေးလိုက်မှ မေသက်နွယ်လဲ အရှိန်တတ်ကာ ကျွန်တော့်ရင်ဘက်ပေါ်တွင် လက်ထောက်ကာ ပေါင်ကိုကားပြီး ဆောင့်တော့သည်။ ကျွန်တော်လဲ အောက်မှနေပြီမေသက်နွယ်ကို ပြန်ကာ ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။
မေသက်နွယ်ကလဲ အသံမျိုးစုံထွက်ကာ ဆောင့်တော့သည်။ “အား…..ကိုပြန်ဆောင့်ပေး…… ချစ်ကိုမြန်မြန်ပြန်ဆောင့်ပေး…..အား….. မေသက်နွယ်မှာ ကျွန်တော်ကို ဆောင့်ခိုင်းသော်လည်း မှန်ကိုတော့အကြည့်မပျက်ပေ။ မေသက်နွယ်မှာလဲ စောက်ရည်များတအားထွက်ကာ ကျွန်တော့်လဥပေါ်ပင်စီးကျလာသည်။. ကျွန်တော်နှင့်မေသက်နွယ်လဲ စီချက်ညီညီပြိုင်ဆောင့်ရင်း ကာမအထွဋ်ထိပ့်သို့ရောက်သွားတော့သည်။ မေသက်နွယ်ကတော့မှန်ကိုကြည့်ပြီး သူမအဖုတ်လေးထဲမှ ကျွန်တော့်လီးကို တဖြည်းဖြည်းထုပ်လိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ စီးထွက်လာသော လရည်နှင့် စောက်ရည်များကို အရသာခံကာကြည့်နေသည်။ ပြီးမှကျွန်တော့်ပေါ်ကဆင်းကာ လိုးပြီးကာစလီးကို န်ှတ်ခမ်းနုနုလေးထဲထည့်ကာ သေသေချာချာစုပ်ပေးတော့သည်။ ပြီးထားသောကြောင့် ပျော့လာနေသောလီးမှာ သူမ၏နှုတ်ခမ်းအထိတွေ့ကြောင့် ပြန်ကာထောင်မတ်လာသည်။
မေသက်နွယ်ကလဲ လီးကို အရင်းကကိုင်ကာ လီးတစ်ချောင်းလုံးကို နှုတ်ခွးလေးနှင့် ဖိကာစုပ်ပေးနေသည်။ ထို့နောက်ဒစ်ဖူးလေးကို လျာလေးနှင့်ယက်ကာ ရစ်စုပ်ပေးပုံမှာ ဆရာကျလွန်းသောကြောင့် ကျွန်တော့်လီးပင် နောက်တစ်ခါ ပြီးချင်သွားသည်။ မေသက်နွယ်က ကျွန်တော့်လီးကို အားကအောင်စုပ်ပြီးမှ ကျွန်တော့်ပေါ်ကို ထပ်ကာလာအိပ့်သည်။ ကျွန်တော်လည်း မေသက်နွယ်ကိုဖက်ကာ လီးစုပ်ထားေူာနှုတ်ခမ်းလေးကို တတ်မက်စွာနမ်းလိုက်သည်။ သူမနှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းလိုက်သည်ဆိုရင်ဘဲ ရလာသောရနံတစ်ကြောင့် ကျွန်တော့်ရင်ထဲ တစ်စုံတစ်ခုကိုရင်နင့်အောင် ခံစားလိုက်ရသည်။ ဒါဆို သူမနှုတ်ခမ်းလေးမှ ယခုကဲ့သို့ ရနံတစ်ခု ရသောနေ့က မေသက်နွယ်က အချောအလှလေး တစ်ယောက်ဖြစ်သည့်တိုင် သူမကို စိတ်ဝင်စာသူများ အများအပြားရှိသည်။ ထိုသူများထဲတွင် သူမတို့အဖွဲ့ထဲမှ နိုင်မင်းဆိုသော သူမ၏ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လဲ အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
တခြားသူများဆိုလျှင်လဲ သူမနှင့်အေယမဂျာမတူသည့် ကောင်လေးများကပင် အမြဲလူပျိုလှည့်လာကာ ချောင်းနေကြသူဖြစ်သည်။ သို့သော်လဲ မေသက်နွယ်မှာ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ စိတ်ဝင်စားချင်းမရှိခဲ့ပေ။ အကြောင်းမှာ သူမအကြောင်းကို အမြန်ဆုံးသိနိုင်သော သူများဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မေသက်နွယ်မှာ တက္ကသိုလ်စတတ်သည့်အချိန်မှစကာ သူမတွင် လူသိမခံနိုင်သောအကြောင်းများ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းမှာ သူမ၏မိခင်ကြောင့်ဟုပင် ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မေသက်နွယ်၏မိခင် ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ပင် သူမသမီး၏ အဖြစ်ကို သိရှိချင်းမရှိခဲ့ချေ။ မေသက်နွယ်ဖခင်မှာ ဝန်ထမ်းဖြစ်သောကြောင့် သူတို့နှင့် ခွဲနေရသူဖြစ်သည်။ လေးလတစ်နှစ်မှ တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သာ ပြန်လာနိုင်သူဖြစ်သည်။ မေးက်နွယ်မှာလဲ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို ကိုယ်အထက်တန်းကျောင်းတွင် တတ်နေရသူမို့ မေသက်နွယ်တို့အိမ်တွင် ဒေါ်သက်သက်ခိုင်တစ်ယောက်သာ ကျန်နေခဲ့သည်။
မေသက်နွယ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲပြီး ပြန်လာချိန်တွင်တော့ ဒေါ်သက်သက်ခိုင်အကြောင်းများကို မထင်မှတ်ဘဲ သိလိုက်ရသည်။ မေသက်နွယ်မှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကျောင်းနှင့်သာအချိန်ကုန်ခဲ့ရသူမို့ နွေရာသီပိတ်ရက်တွင် ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက် သူငယ်ချင်းတွေနှင့် လျောက်လည်လိုက်နှင့် အချိန်ကုန်ခဲ့သည်။ တရက်တွင် မေသက်နွယ်မထင်မှတ်ဘဲ အိမ်ကိုပြန်လာချိန်တွင် ထူးဆန်းသည်များကို မေသက်နွယ်တွေ့လိုက်ရသည်။ သူမ၏မိခင် ဒေါ်သက်သက်ခိုင်မှာ သူမနှင့်အလုပ်တူလုပ်သည်ဆိုသော ပွဲစားဦးစိုးမြင့်နှင့် ဖောက်ပြန်နေကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သမီးမရှိချိန်တွင် ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေသာ ဒေါ်သက်သက်ခိုင်မှာ အခန်းတံခါးပင်မပိတ်ဘဲ ဦးစိုးမြင့်လိုးတာကို ခံနေသည်။ ဦးစိုးမြင့်ကဒေါ်သက်သက်ခိုင်အား နံရံတွင် ခေါင်းကိုကပ့်ပြီး လက်ဖင်ဖိထားကာ နောက်မှနေပြီး မက်တပ်ရပ်ပြီး ဆောင့်လိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကလဲသူမယောက်ျားထံမှ မရသော ကာမအရသာကို ဦးစိုးမြင့်ထံမှ ကောင်းကောင်းကြီးခံစားနေသည်။
ဖြန်း…… ဖြန်း….ကော့ထားသက်သက်…….. အင့် အင့် ကြိုက်လား သက်သက်” “အား……… အား…… ကြိုက်တယ် လိုးလိုး ရှင်ကြိုက်သလိုလိုး…… အား…… အား……” ထိုချိန်အပြင်မှပြန်ရောက်နေသော မေသက်နွယ်မှာ သူမမိခင် ဒေါ်သက်သက်ခိုင်၏ တဏှာရမက်ထန်ပုံများကို အခန်းဝမှကြည့်နေသည်ကိုပင် မသိနိုင်ရှာပေ။ ဦးစိုးမြင့်ကလဲ ဒေါ်သက်သက်ခိုင်အိုးကြီးအား သိမ့်သိမ့်တုန်အောင် လိုးရင်း နို့နှစ်ဖက်ကိုလဲ ဆွဲကာချေပေးနေသည်။ မေသက်နွယ်ကြည့်နေစဉ်မှာဘဲ ဦးစိုးမြင့်ရဲ့လိုးချက်များ ပိုမိုကာ သွက်လာပြီး ဒေါ်သက်သက်ခိုင်နို့အား စုပ်ကိုင်ရင်း အားပြင်းပြင်းနှင့် ဆယ်ချက်ခန့်ေောင့်ကာလိုးပြီးချိန်တွင် ဒေါ်သက်သက်ခိုင်နောက်တွင် အိုးကြီးအားဖိကပ်ကာ ငြိမ်သွားတော့သည်။ ဒေါ်သက်သက်ခိုင်လဲခဏအကြာတွင် အောက်သို့ခွေကာ ကထသွားတော့သည်။ ဦးစိုးမြင့်က ဒေါ်သက်သက်ခိုင်အားထူနေချိန်တွင်တော့ မေသက်နွယ်က သူမအားမြင်သွားမည်စိုးသောကြောင့် တိတ်တစိတ်ထွက်ပြေးသွားသည်။
မေသက်နွယ်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သူမမိခင်အရှက်မရစေရန် ဘာမှမသိသလိုနေပေးလိုက်သည်။ သို့သော် သူမမိခင်တို့လိုးပွဲကိုတော့ ပြန်ကာချောင်းရင်း လိုးနည်းမျိုးစုံကို သူမသိရှိခဲ့ရသည်။ သူမလည်း လက်နှင့်အာသာဖြေသည်အရသာကို တဖြည်းဖြည်းပို၍နှစ်သက်လာသည်။ ထို့ကြောင့် သူမစောက်စိလေးမှာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ထွားလာသည်။ ထိုသို့ဖြင့် မေသက်နွယ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ကာ တက္ကသိုလ်တတ်ရမည့် အချိန်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ “သမီးရေ သမီးအဖွားဆေးရုံးတတ်နေရလိုတဲ့ အဲ့ဒါမေမေတို့သွားရမယ်” “မေမေကလဲ…….. သမီးတက္ကသိုလ်တတ်ရတော့မှာ မလိုက်ချင်ပါဘူး” “အေးပါသမီးရယ်……. သမီးမလိုက်ချင်လဲ အိမ်မှာအေးတေးနေခဲ့ပေါ့ မေမေဘေးအိမ်ကို မှာထားခဲ့မယ်” မေသက်နွယ်မှာ တက္ကသိုလ်ဆိုသောနေရာိးု့ စရောက်သောကြောင့် အရမ်းပင်ပျော်ရွှင်နေခဲ့သည်။ သူမနေ့ပိုင်တွင် အချိန်မရှိတော့သောကြောင့် အိမ်သို့ပြန်ကာလာသည်။ မေသက်နွယ်လဲတစ်ယောက်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်မို့ စိတ်ရှိတိုင်းနေကာ ရေချိုးနေလိုက်သည်။
ရေချိုးပြီးသည်နှင့် သူမအမေနှင့်ဦးစိုးမြင့်တို့ လိုးကြသည်ကို ပြန်လည်ကာမြင်ယောင်ရင်း စောက်ဖုတ်လေးအား လက်နှင့်ကလိရင်း အာသာဖြေနေသည်။ ထိုအချိန်သူမအခန်းသတွင် အရိပ်တစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရသောကြောင့် မေသက်နွယ် ကုတင်ပေါ်ကဆင်းကာ ထွက်ကြည့်လိုက်သည်။ ထိုအချိန်မှာဘဲ မေသက်နွယ်ပါစပ်ကို လက်ဖြင့်အုပ်ကာ အခန်းတံခါးကို ပိတ်လိုက်သည်။ပြီးမှမေသက်နွယ်ပါးစပ်ကို လွတ်ပေးလိုက်သည်။ “ရှင်ဘာလာလုပ်နာလဲ ကျမအခန်းထဲကို ဘာလို့ဝင်လာတာလဲ” “ခလေးတစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေမှာဆိုးလို့ ဦးကအဖော်ဖြစ်နေပေးမလို့ပါကွ” “ခလေး မေမေနဲ့လိုးတိုင်း မင်းလေးလာလာချောင်းနေထဲက ဦးသိပျါယ်ကွ” “မင်းလေးလဲ ခံချင်နေမှာပေါ့” “ရှင်မေမေကိုသာရမယ် ရှင်ကျမကိုတော့မရဘူး” “ဟုတ်လိုးလားကွာ…… လာပါ” ဦးစိုးမြင့်က မေသက်နွယ်အားဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်ကတော့ ကြောက်နေသည်မို့ ရုန်းကန်ကာနေသည်။
ထို့နောက်ဦးစိုးမြင့်က ကုတင်ပေါ်တင်ပြီး ပုဆိုးကိုချွတ်ကာ မေသက်နွယ်ပေါင်ကြားတွင် ဝင်လိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာပြန်ကာ တိုက်ခိုက်သော်လည်း အားချင်းမမျှဘဲ အလျော့ပေးလိုက်ရသည်။ ဦးစိုးမြင့်က မေသက်နွယ်၏ အပျိုစောက်ဖုတ်လေးကို လီးဖြင့်တေ့ကာ တဖြေးဖြေးချင်း ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ အား……. အား…… နာတယ်….. လူယုတ်မာကြီး လွတ်….. အား……. မေသက်နွယ်မှာ စောက်ဖုတ်လေးမှာ စောစောထဲက တစ်ယောက်ထဲ အာသာဖြေထားသည်မို့ အရေများစိုနေကာ ဦးစိုးမြင့်လီးအား ကောင်းကောင်းဝင်နိုင်စေရန် အထောက်အကူဖြစ်နေသည်။ ဦးစိုးမြင့်ကလီးသင်ပြီဆိုသည်နှင့် မေသက်နွယ်၏ အပျိုအမှေးပါးလေးအား ဆက်ကနဲ ထိုးဖောက်လိုက်တော့သည်။ အား……… အား…….. မေသက်နွယ်၏ အပျိုစောက်ဖုတ်လေးမှ ဦးစိုးမြင့်လီးကြီးက ဝင်ကာတစ်စို့နေသောကြောင့် လည်ပင်းရိုးများပင်ထောင်ကာ အော်နေရသည်။
ဦးစိုးမြင့်က အထာနပ်သူပီပီ ဆက်မလိုးသေးပဲ နှုတ်ခမ်းလေးအား နမ်းပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်ကတော့ အနမ်းမခံဘဲ လှည့်ထွက်ကာ ရုန်းနေလိုက်သည်။ ထိုအခါဦးစိုးမြင့်က မေသက်နွယ်အား ဆောင့်ကာလိုးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာ အခုမှအပျိုမှေးပေါက်ထားသည်မို့ ဦးစိုးမြင့် ဆောင့်ချက်များမှာ အသဲခိုက်အောင်နာလှသည်။ ထို့နောက်ဦးစိုးမြင့်က နှုတ်ခမ်းကိုမနမ်းတော့ဘဲ မေသက်နွယ်၏ အပျိုနို့လေးများကို စို့ပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်နို့လေးများမှာ အပျိုနို့လေးများပီပီချွန်ထွက်မနေဘဲ နို့အုံလေးအတွင်းသို့ ကပ်နေသည်။ ဦးစိုးမြင်က ထိုနို့သီးလေးအား ထွက်လာအောင် အားဖြင့်စုပ်ကာပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာ အပျိုဖြစ်သည့်အချိန်မှစ၍ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှမကိုင်ဖူးသော သူမ၏ နို့လေးများကို ရုတ်တရက်စို့ခံလိုက်ရသောကြောင့် ရင်ဘတ်ကလေးပင် ကော့ကာသွားသည်။ ဦးစိုးမြင့်ကလျှာလေးနှင့် ကလိကာစို့ပေးသောကြောင့် သူမတွင်တခါမျှမပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးသော ကာမစိတ်များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
ဦးစိုးမြင့်က နို့သီးလေးနှစ်ဖက်ကို ပြောင်းကာစို့ပေးရင်း အောက်ကလဲ အလိုးမပျက်ဘဲ ဆက်ကာလိုးနေသည်။ အား….. မေသက်နွယ်ထံတွင်ကာမစိတ်များလွှမ်းမိုးလာသောကြောင့် စောက်ရည်များ စိမ့်ထွက်လာကာ လီးအဝင်အထွက်မှာအရင်ကထက်ပို၍ ကောင်းမွန်လာသည်။ ထို့ကြောင့်ဦးစိုးမြင့်က နို့စို့တာကိုရပ်လိုက်ပြီး မေသက်နွယ်လက်နှစ်ဖက်ကို နို့အုံလေးပေါ်သို့တင်ကာ တရက်ဆက်ဆောင့်ကာလိုးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာ ဦးစိုးမြင့်ဖွင့်ပေးခဲ့ေား ကာမကျောများကြောင့် လက်နှစ်ဖက်က နို့သီးခေါင်းလေးများကို ချေကာ ဦးစိုးမြင့်လိုးသမျှကို အနေထားမှန်မှန်နှင့် ခံတတ်လာသည်။ ဦးစိုးမြင့်ကလဲ မေသက်နွယ်အားတရက်ဆက်ဆောင့်လိုးပြီး မကြာခင်တွင် မေသက်နွယ်အဖုတ်လေး၏ ညှစ်အားကြောင့် ကြာကြာမထိန်းနိုင်ဘဲ ပြီးသွားတော့သည်။ မေသက်နွယ်၏ အပျိုစာက်ဖုတ်လေးမှာ ဦးစိုးမြင့်၏ လရည်များကို ညှစ်ကာညှစ်ကာ ယူနေတော့သည်။
အပျိုရိုင်းမလေးမေသက်နွယ်မှာ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလိုးခံလိုက်ရသောကြောင့် မလှုပ်နိုင်တော့ဘဲ အိပ့်ယာပေါ်တွင်လှဲနေလိုက်ရသည်။ မေသက်နွယ်မှာ မျက်လုံးကိုမှိတ် လှဲနေခဲ့သည်မှာ ဘယ်လောက်ကြာသွားသည်မသိ ဦးစိုးမြင့်က ရေစွတ်ထားသောအဝတ်ဖြင့် လရောက် သုတ်ပေးမှ သတိပြန်ရလာသည်။ အဟင့်….. မေသက်နွယ်ငိုသံလေးမှာ အခန်းထဲတွင် ပျံလွှင့်ကာလာသည်။ ဦးစိုးမြင့်ကတော့ မေသက်နွယ်တစ်ကိုယ်လုံးအား ရေအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပေးပြီး နောက်အဝတ်တစ်ခုနှင့် မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးအား သုတ်ပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှ ဦးစိုးမြင့်လရည်များနှင့် သွေးစများရောပြွန်းကာထွက်နေသည်။ စောက်ဖုတ်လေးမှာလဲ ရဲရဲလေးနှင့် ပြဲကာနေတော့သည်။ “ရှင်ထွက်သွား………… အခုထွက်သွား………..” မေသက်နွယ်မှာ ငိုသံလေးတိတ်ပြီး ဒေါသသံများ ထွက်ပေါ်လာတော့သည်။
“ခလေးကလဲကွာ ဘာလို့အဲ့လောက်ထိစိတ်ကြီးနေရတာလဲ ဦးကခလေးကို အဖော်ပြုပေးမလို့ပါကွ” “ထ….လာ….” ဦးစိုးမြင့်က မေသက်နွယ်ကိုထူကာ ဖန်ခွက်ကလေးဖြင့် ရေတစ်ခွက်တိုက်လိုက်သည်။ ပြီးမှ ဆောင်လေးကိုခြုံပေးကာ အခန်းအပြင်ကိုထွက်သွားတော့သည်။ မေသက်နွယ်လဲ ပင်ပန်ယနေေူာကြောင့်အိပ့်ပျော်သွားပြီး ညနေစောင်းမှပြန်နိုးလာခဲ့သည်။ ဂါဝန်လေးတစ်ထည်ကိုဝတ်ပြီး ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်ချိန်တွင် သူမသူငယ်ချင်းမျာက ဆက်ထားသောဖုန်းများ ဝင်ထားသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ “အေး…သူငယ်ချင်း.. ငါနေ့လည်ကသိပ့်နေမကောင်းလို့ နင်တို့နဲ့ချိန်းထားတာမလာလိုက်ရဘူး အေး….. အေး…. ဒါဘဲနော်…..” မေသက်နွယ်လဲဗိုက်ဆာလာသည်မို့ မီးဖိုခန်းထဲသို့ ထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။ အချိုရေနှင့်မုန့်များစားပြီး အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းသို့ထွက်လာချိ်န်တွင် “ရှင်….. ရှင်…ခုထိမန်ြသေးဘူးလား” “ခလေးနိုးပြီလားကွ” “ရှင်…အခုထွက်သွား ကျမအိမ်ကနေအခုထွက်သွား……….သွား….. သွား……….” မေသက်နွယ်က အိမ်ရှေ့ခန်းတွင်အရက်သောက်နေသော ဥိ်းစိုးမြင့်ကို ရိုက်ပုတ်ကာထုပ်နေသည်။
ဦးစိုးမြင့်ကချုပ်ပြီးပြီး သူမ ဖေဖေနှင့်မေမေအခန်းထဲသို့ချီမကာခေါ်လာသည်။ ထိုနောက်ဘီရိုကိုဖွင့်ကာ အရာတစ်ခုကိုယူပြီး သူမအားကုတင်ပေါ်သို့တင်ပေးလိုက်သည်။ ထိုနောက်မေသက်နွယ်လက်အားမြှေက် ကာကုတင်အလယ်မွှေ့ယာအောက်သို့လက်နှိုက်လိုက်ပြီး မေသက်နွယ်လက်နှစ်ဖက်အား ဒေါ်သက်သက်ခိုင်အားလိုးရာတွင်အသုံးပြုသော ကုတင်နှင့်တွဲထားသောလက်ထိပ့်ဖြင့် လက်အားချုပ်လိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာတော့ကုတင်အလယ်တွင်လူးလိမ့်ကာနေသည်။ ထိုနောက်ဦးစိုးမြင့်က ခြေထောက်တစ်ခေါင်းကိုဆွဲလိုက်ပြီး ဘီရိုထဲမှယူလာသောကြိုးဖြင့် ကုတင်တိုင်တွင် ချည်လိုက်သည်။ ထို့နောက်ဖြေသက်နွယ်မှာခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးချုပ်ခံလိုက်ရပြီးလှုပ်မရဘဲရှိနေသည်။ “ရှင်……ရှင့်…ကိုရဲတိုင်မယ်” “စိတ်လျော့ပါခလေးရာ ရဲတိုင်ရင်မင်းတို့အရှက်ကွဲသွားမှာပေါ့” မေသက်နွယ်လဲဗိုက်ဆာလာသည်မို့ မီးဖိုခန်းထဲသို့ ထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။
အချိုရေနှင့်မုန့်များစားပြီး အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းသို့ထွက်လာချိ်န်တွင် “ရှင်….. ရှင်…ခုထိမန်ြသေးဘူးလား” “ခလေးနိုးပြီလားကွ” “ရှင်…အခုထွက်သွား ကျမအိမ်ကနေအခုထွက်သွား……….သွား…….. သွား……….” မေသက်နွယ်က အိမ်ရှေ့ခန်းတွင်အရက်သောက်နေသော ဥိ်းစိုးမြင့်ကို ရိုက်ပုတ်ကာထုပ်နေသည်။ ဦးစိုးမြင့်ကချုပ်ပြီးပြီး သူမ ဖေဖေနှင့်မေမေအခန်းထဲသို့ချီမကာခေါ်လာသည်။ ထိုနောက်ဘီရိုကိုဖွင့်ကာ အရာတစ်ခုကိုယူပြီး သူမအားကုတင်ပေါ်သို့တင်ပေးလိုက်သည်။ ထိုနောက်မေသက်နွယ်လက်အားမြှေက် ကာကုတင်အလယ်မွှေ့ယာအောက်သို့လက်နှိုက်လိုက်ပြီး မေသက်နွယ်လက်နှစ်ဖက်အား ဒေါ်သက်သက်ခိုင်အားလိုးရာတွင်အသုံးပြုသော ကုတင်နှင့်တွဲထားသောလက်ထိပ့်ဖြင့် လက်အားချုပ်လိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာတော့ကုတင်အလယ်တွင်လူးလိမ့်ကာနေသည်။ ထိုနောက်ဦးစိုးမြင့်က ခြေထောက်တစ်ခေါင်းကိုဆွဲလိုက်ပြီး ဘီရိုထဲမှယူလာသောကြိုးဖြင့် ကုတင်တိုင်တွင် ချည်လိုက်သည်။
ထို့နောက်ဖြေသက်နွယ်မှာခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးချုပ်ခံလိုက်ရပြီးလှုပ်မရဘဲရှိနေသည်။ “ရှင်……ရှင့်…ကိုရဲတိုင်မယ်” “စိတ်လျော့ပါခလေးရာ ရဲတိုင်ရင်မင်းတို့အရှက်ကွဲသွားမှာပေါ့” ထို့နောက်ဦးစိုးမြင့်က မေသက်နွယ်ဝတ်ထားသော ဂါဝန်လေးကို အပေါ်သို့လှန်လိုက်ပြီး စောက်စိလေးကို လျှာထိပ့်လေးဖြင့် ယက်ပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်အတွက် ပထမဆုံးရသော ခံစားမှုမို့ ခြေချောင်းလေးများပင်ကုပ်သွား သည်။ ဦးစိုးမြင့်က စရုံသာစထားခဲ့ပြီး ဂါဝန်လေးကို အပေါ်ထိဆက်လှန်ကာ နို့နှစ်လုံးကြားရှိ ရင်စုံအလယ်တည့်တည့်လေးကို လျှာထိပ့်လေးဖြင့် လိုက်ကာပွတ်ပေးလိုက်ပြီး ချက်၏ အပေါ်နားလေးရောက်မှ အပေါ်သို့ ပြန်တတ်ကာ ယက်ပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာ ဦးစိုးမြင့်အထိတွေတွင် ဘယ်လိုမှမထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲ တွန့်တွန့်လူးကာနေသည်။ ဦးစိုးမြင့်ကလဲ နို့သီးခေါင်းလေးကိုရှောင်ကာ နိုအုံသားလေးများကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် ပွတ်ကာ လိုက်နမ်းပေးလိုက်သည်။
ထိုချိန်တွင် မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ အလွန်ယားတတ်လာပြီး ကော့ပျံကာလာသည်။ ဦးစိုးမြူ့်၏ုာမခလုပ်များကို တစ်ခုချင်းဖွင့်မှုကြောင့်လဲ ကာမစိတ်များ အရှိန်မြင့်ကာတတ်လာသည်။ ဦးစိုးမြင့်က မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ဖြင့်အုပ်ကိုင်ကာ လက်ခလယ်လေးဖြင့် စောက်စိလေးအားပွတ် ပေးလိုက်ချိန်တွင် “အာ့…… အား……. ရှင်စောစောကမှလုပ်ထားတာ အခုထပ်လုပ်ရင် သေသွားမှာပေါ့ ရှင်အခုထွက်သွား…… ထွက်သွား…….” မသေပါဘူးခလေးရာ မင်းကိုတိုက်ထားတဲ့ရေထဲမှာ အားဆေးပါထည့်တိုက်လိုက်ပါတယ်ကွ” ဦးစိုးမြင့်က မေသက်နွယ်၏ စောက်ဖုတ်အပေါ်ပိုင်း ဆီးဂုဏ်နေရာလေးအား နှုတ်ခမ်းဖြင့် ပွတ်ကာနေရင်း ပြောလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာလဲ ညည်းသံများဆူညံနေရင်း ကာမစိတ်များထုံလွှမ်းကာနေသည်။ အား…….. အား…….. အင်း…… ထိုခါမှ ဦးစိုးမြင့်က စောက်စီလေးအားဖိစုပ်ကာ နမ်းလိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်အတွင်းသားလေးထဲကို လက်ခလယ်လေးထည့်ကာ မွှေပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာတော့ စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ အရည်များ တဆက်ဆက်နှင့် ထွက်လာတော့သည်။
ထိုခါမှဦးစိုးမြင့်ကာ ခြေထောက်နှစ်ခေါင်းကို ဖြုတ်ပေးလိုက်ပြီး မေသက်နွယ်ပေါင်ကြားထဲသို့ဝင်ကာ မေသက်နွယ်အား ဆောင့်ကာ လိုးလိုက်သည်။ သည်ခါတွင်တော့ မေသက်နွယ်ထံမှ ရမက်ထန်သော အသံသာ ထွက်ပေါ်လာတော့သည်။ အခန်းထဲတွင်လဲ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်မှစောက်ရည်များစိုရွှဲနေသောကြောင့် လိုးသံများဆူညံနေသည်။ ဦးစိုးမြင့်က နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းကာ လိုးချိန်တွင်တော့ မေသက်နွယ်က ပြန်နမ်းကာ အလိုးခံနေသည်။ ထိုညက မေသက်နွယ်မှာ သုံးချီမက ခပ်ကြမ်းကြမ်း အလိုးခံလိုက်ရသည်။ မေသက်နွယ်အခန်းထဲတွင် “အား….. အင်း….. အား…. အား………….. ဦးစိုးမြင့်ပုခုံးပေါ်တွင် မေသက်နွယ် ခြေနှစ်ချောင်းတင်ထားပြီး လိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးစိုးမြင့်ရဲ့လိုးချက်များက အရင်ထက်ပိုကာ ကြမ်းတမ်းနေသည်။ မေသက်နွယ်မှာလဲ အိပ့်ယာခင်းများကို စုပ်ကိုင်ကာ မျက်လုံးကို မှိတ်ထားပြီး ဦးစိုးမြင့်လိုးသမျှကို ခံနေသည်။
“မေမေပြန်လာရင်ရော ဦးကလိုးပေးဦးမှာလား” “ခလေးကို ဦးကအမြဲလိုးပေးမှာပေါ့ကွ ဒီလိုဆောင့်ရင်ရော ကြိုက်လား…..” ဦးစိုးမြင့်ကလီးကို အဆုံးထိထုပ်ပြီး လိုးဆောင့်နေခြင်းဖြစ်သည်။ မေသက်နွယ်မှာလဲ ဘယ်လောက်ထိသင်ပြခံလိုက်သည်မသိ ဦးစိုးမြင့်လိုးချက်များကို တော်တော်ကြွေနေသည်။ ဦးစိုးမြင့်က လီးကိုထုပ်ပြီး ဒူးထောက်ကာ ရပ်လိုက်ချိန်တွင် မေသက်နွယ်က ဦးစိုးမြင်လီးကြီးကို အားရပါးရ စုပ်တော့သည်။ စုပ်ချက်များကလဲ အလွန်ပင်ဆရာကြလွန်းလာသည်။ “အား….. အား……. ကောင်းလိုက်တာခလေးရာ စုပ်….စုပ်…..” ဦးစိုးမြင့်က ခေါင်းကိုကိုင်ပြီး သေချာစုပ်ခိုင်းနေသည်။ ဦးစိုးမြင့်က မေသက်နွယ်ခေါင်းကို တစ်ချက်နှစ်ချက် ဆောင့်ပေးလိုက်ပြီး လီးကို ထုပ်ကာ. “ခလေး…. ခလေးမေမေကို လိုးသလို လိုးပေးမယ် ခံမှာလား” “ဘယ်လိုလဲဦးရဲ့ ” မေသက်နွယ်က စကားပြောပြီးသည်နှင့် လီးကိုပြန်ကာစုပ်လိုက်သည်။
“ခလေးပထမဆုံး ချောင်ကြည့်တုန်းကလိုပေါ့ကွ ဘယ်လိုလဲ ခံမှာလား…အင်း……. အင်း…..အဲတာဆို… လာ… နံရံကိုလက်ထောက်” မေသက်နွယ်က ကုတင်ပေါ်ကဆင်းကာ နံရံတွင် လက်ထောက်ပြီး ဖင်ကိုကော့ပေးထားလိုက်သည်။ ဦးစိုးမြင့်ကလဲ ကြမ်းပြင်တွင် ဒူးထောက်ထိုင်ကာ မေသက်နွယ်ဖင်လေးကိုဖြဲကာ စောက်ဖုတ်လေးကို နောက်မှနေပြီး ယက်ပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်ကလဲ အိုးကြီးကိုကားကာ နောက်သို့ ပြန်ကာပြန်ကာပြစ်ပြစ်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးမှဦးစိုးမြင့်က မေသက်နွယ် အိုးကြီးကို တစ်ချက်ရိုက်ကာ စောက်ဖုတ်ရဲရဲလေးကို ဖြဲပြီး ဒစ်ပြဲကြီးကို ဆောင့်ကာ သွင်းလိုက်တော့သည်။ “အား…. အား…… အား….” လီးကြီးမှာ မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ တဆုံးဝင်သွားသောကြောင့် မေသက်နွယ်မှာ လက်ထောက်မထားနိုင်တော့ဘဲ နံရံကို ခေါင်းဖြင့်ကပ်လိုက်ရသည်။ ဦးစိုးမြင့်ကလဲ မေသက်နွယ်ခေါင်းကို ကိုင်ကာ နောက်မှနေ၍ အိုးကြီးကို ဆက်ဆက်ခါနေအောင် ဆောင့်လိုးပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်ကတော့ အားနေသောလက်နှစ်ဖက်နှင့် အိုးကြီးကိုဖြဲကာ လီးအဝင်ထွက်ကောင်းစေရန် လုပ်ပေးနေသည်။
ဖြန်း…. အား….အား…….. အား…….ဦးဆောင့်လိုးပေး………. ဆောင့်လိုးပေး…………. ခလေးစောက်ဖုတ်ကိုပြဲနေအောင်လိုးပေး… မေသက်နွယ်မှာ အသံမျိုးစုံထွက်ကာ ဦးစိုးမြင့်အလိုးကို ခံနေသည်။ ဦးစိုးမြင့်က ဒေါ်သက်သက်ခိုင်အားလိုးသည့်အတိုင်း မေသက်နွယ်နို့လုံးလုံးလေးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ကာ ကိုင်ရင်း ဆောင့်ကာဆောင့်ကာလိုးနေသည်။ “အား……. အား…… မနက်ဖြန် မေမေပြန်လာမှာ….. ဒီနေ့အဝလိုးပေး……… အား……… အင်း… မေသက်နွယ်မှာ တဏှာရမက်များအောက်တွင် မထိန်းချုပ်နိုင်လောက်အောင်ပင် လွှမ်းမိုးလာသည်။ ဦးစိုးမြင့်လဲ ဆောင့်ချက်များပြင်းသထက်ပြင်းကာ ဆောင့်ကာလိုးပေးလိုက်ပြီး မေသက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးထဲတွင် ပြီးပေးလိုက်သည်။ ပြီးမှပေသက်နွယ်ကိုဖက်ကာ ပါးလေးကိုနမ်းလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်ကတော့ ဦးစိုးမြင့် ရှေ့တွင်ပေါင်ကိုကားကာထိုင်လိုက်ပြီး လရည်နှင့် စောက်ရည်မထားနှင့် စိုရွှဲနေသော လီးကြီးကို စုပ်ပေးလိုက်သည်။
စောက်ဖုတ်လေးထဲမှလဲ ဦးစိုးမြင့်လရည်များ ပြန်ကာအန်ထွက်လာသည်။ ပြီးမှဦးစိုးမြင့် နှုတ်ခမ်းအားနမ်းလိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲသို့ဝင်သွားသည်။ နောက်ရက် ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ပြန်လာသော်လည်း သူတို့နှစ်ဥိ်းရဲ့တဏှာရမက်များက အဆုံးသတ်မသွားဘဲ ရှိနေသည်။ ကျွန်တော်မေသက်နွယ်ကို သံသယဖြစ်သော်လည်း အလွန်မှအေးဆေးကာ ပျော်ပျော် နေတတ်သောသူမို့ ကျွန်တော် အထင်မှားနေသည်ဟုသာထင်ခဲ့သည်။ သိုသော်မေသက်နွယ်တွင် သိသိသာသာအချက်များ ပိုပိုကာများလာသည်။ မေသက်နွယ်ပင်တီလေးတွင် ကျွန်ျော်မစခင်ကပင် အရည်များစိုရွှဲနေသည်ကလဲ ခဏခဏဖြစ်လာသည်။ တင်သားများတွင် ရိုက်ခံထားရသကဲ့သို ရဲကာနေသည်ကလဲ အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်လာသည်။ မေသက်နွယ်မှာ အပြင်တွင့် နေအေးသလောက် ကုတင်ပေါ်ရောက်သည်နှင့် သူကစကာဦးဆောင်လာတော့သည်။ ကျွန်တော်ထိုအကြောင်းများကို သံသယစဝင်သည့် အချိန်က အလွန်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရသည်။
နေတိုင်း ထိုစိတ်နှင့်နိုးကာ ထိုစိတ်နှင့်ရှင်သန်လာရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုစိတ်ကပင် ကျွန်တော့်ကိုဦးဆောင်ကာ ကာမစိတ်တမျိုး လွှမ်းမိုးလာခဲ့သည်။ ထိုစိတ်၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် မေသက်နွယ်နှင့် လိုးသည့်အခါတိုင်း ကဖွန်တော့်လီးက အစွမ်းကုန်တောင်ကာ မလိုးခင်ကပင် ပြီးချင်နေသည်။ မေသက်နွယ်အားလိုးသည့်အချိန်တွင်လဲ အဖုတ်ထဲလီးရောက်းည်နှင့်မကြာခင် ကျွန်တော်ပြီးသွားသည်။ “ကို……… ခုတစ်လောပိုင်း ကိုပြီးတာအရမ်းမြန်တယ်နော် ” လိုးပြီး၍ပက်လက်လှန်နေသော ကျွနခတော့်ကို မေသက်နွယ်ဖက်ပြီး ပြောလာသည်။ “ဘာလဲ ချစ်ကမပြီးလို့လားကွ” “အလိုလဲမဟုတ်ပါဘူး….. ကိုကအရင်ကနဲ့မတူလို့ပါ………… နောက်ပြီး ချစ်ကိုလုပ်ရင်လဲ မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီး တစ်ခုခုကို စဉ်းစားနေသလိုပဲ ပြီးတော့ကျတော့လဲ လုပ်ရင်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲလုပ်တော့တယ် ကိုစိတ်ပင်ပန်းနေလို့လားဟင်” “အလိုမဟုတ်ပါဘူးချစ်လေးရယ်……. လာ…….” ကျွန်တော်မေသက်နွယ်လို ပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး သူမရဲ့ လည်ပင်းသားလေးတွေကို နပေးလိုက်သည်။
သူမကတော့ကျွန်တော့ကို ပြုံးကာကြည့်နေသည်။ ကျွန်တော်လည်းသူမပါျးလးကို ကိုင်ကာ နှုတ်ခမ်းလေးကခု လက်မနှင့် ပွတ်ကာပေးလိုက်သည်။ ထိုချိန် ကျွန်တော့်စိတ်၏ အမှောင်ကမ္ဘာဘက်ခြမ်းတွင်တော့ တခြားလူသာ အမှန်တကယ်ရှိခဲ့ပါလျှင် ထိုလူ၏လီးကို သူမနှုတ်ခမ်းနုနုထွေးထွေးလေးနှင့် စုပ်ပေးဖူးမည်မှာ သေချာသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲက အတွေးစကားတွေကိုတော့ မေသက်နွယ်မသိရှိနိုင်ပါ ကျွန်တော်သူမနှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်လိုက်ချိန်တွင် သူမနှုတ်ခမ်းလေးအပြက် သူမလျှာလေးကပါ အလုပ်လုပ်ကာ ကျွန်တော့်အား ပြန်ကာနမ်းလာသည်။ လျာလေးနှင့် နှုတ်ခမ်းလေးမှာ တခြားသူ၏ လီးကို သေခြာစွာ ရစ်ပတ်စုပ်ပေးထားသော နှုတ်ခမ်းလေးတစ်စုံဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အတွေးများနှင့် မေသက်နွယ်အား အဆက်မပျက်နမ်းကာပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်လည်း ကျွန်တော့်အဆက်မပျက်အနမ်းတွေကြောင့် မောလာသည်ထင်သည် ကျွန်တော့်ခေါင်းကို အောက်သို့ဖိချကာသူမ၏နို့ပေါ်သို့တင်ပေးလိုက်သည်။
မေသက်နွယ်နို့နှစ်လုံးကြားတွင် တခြားသူ၏လီးထိုးထည့်ကာ လိုးထားမည်ဖြစ်သည်။ နို့သီးခေါင်းလေးများကိုလည်း ထိုလူကလီးဖြင့်ပွတ်ကာ လိုးထားမည်ဖြစ်သည်။ကျွန်တော့်လီးမှာ မေသက်နွယ်ရင်းသား တဝိုက်အားနမ်းရင်း အမှောင်ကမ္ဘာဘက်ခြမ်းက အတွေးများကြောင့် ဆက်ဆက်တုန်အောင်ပင် တောင်နေသည်။ မေသက်နွယ် ကတော့ ကျွန်ခေါင်းကိုကိုင်ကာ ရင်ဘတ်ကိုကော့ကာကော့ကာ ပေးနေသည်။ သူမဗိုက်သားလေးအားနမ်းချိန်တွင်တော့ သူမရဲဗိုက်သားလေးများပေါ်သို့ တခြားလူက စောက်ဖုတ်ကိုလိုးရင်း လရည်များကို သူမဗိုက်သားလေးပေါ်တွင် ပြီးကြာေးခဲ့မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်လည်း သူမဗိုက်သားလေးကို နှုတ်ခမ်းဖြင့်စုပ်ကာ နမ်းပေးနေမိသည်။ မေသက်နွယ်မှာလဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ရမက်ပါသော အနမ်းများကြောင့် မျက်လုံးကိုမှိတ်ကာ ကျွန်တော့်ဆံပင်များကို စုပ်ကိုင်ကာထားသည်။ ထို့နောက်သူမပေါင်လေးနှစ်ဖက်ကို ကားလိုက်ပြီး တခြားသူတစ်ယောက်အား လိုးလို့ရစေရန် ကားပေးထားမည်ဖြစ်သော ပေါင်လေးနှစ်ခေါင်းကို နှုတ်ခမ်းဖြင့်ပွတ်ကာ နမ်းပေးလိုက်သည်။
မေသက်နွယ်မှညတော့ ပေါင်လေးကို နမ်းရုံဖြင့် ခါးကို ကော့ကာကော့ကာပေးလာသည်။ ကျွန်တော်လဲ တခြားသူတစ်ယောက်နှင့် အလိုးကိုခံထားမည်ဖြစ်သော သူမရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကိုဖြဲကာ ထိုလူ၏လီး ဝင်ထွက်ထားသော စောက်ခေါင်းလေးအား လျှာကို အများဆုံးဝင်နိုင်အောင် ထိုးထည့်ကာ မွှေပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်စောက်စိလေးကတော့ကာမစိတ်များ အလွန်တတ်ကာ မာထောင်နေသည်။ ကျွန်တော်လည်း သူမစောက်ဖုတ်လေးအား လျှာ အပြားလိုက်ဖြင့် စောက်စိလေးထိရောက်အောင် ယက်ပေးလိုက်သည်။ မေသက်နွယ်မှာ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘဲ ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုဖိကိုင်ကာ သူမစောက်စိလေးနှင့် ရအောင် ပွတ်နမ်းစေတော့သည်။ ကျွန်တော် သူမစောက်ိးလေးအား စုပ်နမ်းပေးလိုက်ချိန်တွင်တော့ အသက်ရှုသံများမြန်ကာ ကျွန်တော်ခေါင်းကို ပေါင်နှစ်လုံးနှင့် ညှပ်ပြီး ကော့ကာကော့ကာ ပြီးသွားတောဘသည်။ ကျွန်တော်လဲ သူမပြီးသွားမှ စောက်ဖုတ်လေးပေါ်တွင် လီးကိုတင်ကာ ဆယ်ချက်ခန့်ထုလိုက်သည်နှင့် လရည်များထွက်ကာ ပြီးသွားလေတော့သည် ….. ပြီးပါပြီ။